ပျော်ရွှင်စရာနေ့ရက်တွေကို ပိုင်ဆိုင်စေမယ့် အဖိုးတန် နည်းလမ်းလေးများ - CeleLove
ပျော်ရွှင်ရတာ လူတွေအားလုံးက နှစ်သက်ကြပါတယ်။ ပျော်ရွှင်ခြင်းက ကျန်းမာခြင်းအတွက် ရုပ်ရည်နုပျိုခြင်းတို့အတွက် အထောက်အကူပြုနေတဲ့အရာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အမြဲတမ်းလိုလို စိတ်ပူပန်မှုတွေနဲ့ ပြည့်နေတဲ့သူမှာ ရောဂါတွေ ဖြစ်ဖို့လိုသလို ရုပ်ရည်ရင့်ရော်ခြင်းကိုလည်း ဖြစ်စေပါတယ် …
ပျော်ရွှင်ဖို့အတွက်ဆိုရင် အလိုအလျောက်တော့ ပျော်ရွှင်ခြင်းက ကိုယ့်ဆီကို အမြဲ ရောက်နေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ပျော်ရွှင်ဖို့အတွက် ကိုယ်တိုင်ကလည်း နည်းလေးတွေကို သိထားပြီး လိုက်နာဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ပျော်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ပျော်အောင်နေရမှာပါ။ စိတ်ညစ်တာတွေကို တွေးနေမိရင် စိတ်ရှုပ်တဲ့အကြောင်းတွေကိုသာ တွေးနေမိရင် သင် ပျော်ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ပျော်ရတဲ့ အကြောင်းလေးတွေကို တွေးတာကလည်း သင့်ကို ပျော်စေသလို ဘာ စိတ်ညစ်စရာမှ လျှောက်မတွေးတာကလည်း ပျော်ရစေပါတယ်။
စိတ်ညစ်နေတဲ့အချိန်မှာ တစ်ခါလောက် ရယ်ကြည့်ပါ။ ရယ်တာက ဘယ်လောက် လူ့စိတ်ကို ပေါ့ပါးစေလဲဆိုတာကို အသိသာဆုံး အခြေအနေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရယ်စရာ ရှိ ရယ်လိုက်ပါ။ သူငယ်ချင်းတွေ မိတ်ဆွေတွေနဲ့အတူ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ရယ်မော ပျော်ရွှင်အောင်နေပါ။
မဖြစ်မနေ ကြုံရတဲ့ လောက အခက်အခဲတွေဆိုရင်တော့ သင် ခံစားရမှာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မဟုတ်တဲ့အရာတွေကို သိပ်မခံစားပါနဲ့။ သင့်ကို ခံစားစေလာရပြီဆိုတာနဲ့ မေ့လိုက်ပြီး အာရုံလွှဲလိုက်ပါ။ စိတ်ပေါ့ပါးဖို့က ပျော်ရွှင်သွားဖို့အတွက် သော့ချက် တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
(၄) စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို မြန်မြန် ဖြေရှင်းပါ
စိတ်ဖိစီးလာရင် စိတ်ညစ်လာရင် အကြောင်းအရင်းဆိုတာ ရှိစမြဲ ပါပဲ။ စိတ်ဖိစီးစေတဲ့ အကြောင်းအရင်းကို မြန်မြန် ရှင်းပြီး အဖြေထုတ်လိုက်ပါ။ စိတ်ဖိစီးမှုက အချိန်ကြာလေ သင့်ကို မပျော်ရွှင်ရစေလေပဲ ဖြစ်မှာပါ။ ပျော်ရွှင်တာသာ တာရှည်မခံတာ စိတ်ညစ်ရတာတွေက တာရှည်တတ်လို့ မြန်မြန် ဖြေရှင်းသင့်ပါတယ်နော်။
(၅) စိတ်ညစ်ရင် သိမ်းမထားပါနဲ့
စိတ်ညစ်ရင် ဘယ်တော့မှ တစ်ယောက်တည်း စိတ်အညစ်မခံပါနဲ့။ ဒီလို မဟုတ်တောင် ဘာမှ မလုပ်ပဲ အတွင်းထဲမှာပဲ စိတ်ညစ်စရာကို ထည့်ထားပြီး မဖြေရှင်းဖို့ လုပ်ထားတာမျိုး မလုပ်လိုက်ပါနဲ့။ သင့်ကို စိတ်ညစ်မှုတွေ ဝါးမျိုသွားပြီး မပျော်ရွှင်မှုတွေ ရောက်လာစေနိုင်လို့ သတိထားသင့်တဲ့ အချက်ပါနော်။
(၆) စိတ်ထွက်ပေါက် အမြဲ ထားပါ
လူတိုင်း စိတ်ထွက်ပေါက် ရှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဘယ်သူ့ကို မှ မထိခိုက်စေတဲ့ စိတ်ထွက်ပေါက်တော့ ထားထားသင့်ပါတယ်။ စိတ်ငြိမ်စေတဲ့ တစ်နေရာမှာ အိပ်ပစ်လိုက်တာမျိုး၊ နေရာလွတ်တစ်ခုမှာ ပုလင်းတွေကို ရိုက်ခွဲတာမျိုး၊ ငိုလိုက်တာမျိုး၊ တစ်ယောက်ယောက်ကို ရင်ဖွင့်တာမျိုး၊ တစ်နေရာရာမှာ အကျယ်ကြီး အော်လိုက်တာမျိုး စတဲ့ စိတ်ထွက်ပေါက်ပေးလိုက်မှုတွေက လူကို တကယ်သက်သာစေတာမို့ ပျော်ရွှင်ဖို့ အထောက်အပံ့တွေလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
(၇) သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ပျော်ပါ
စိတ်ညစ်တဲ့အခါ သူငယ်ချင်းတွေက အကောင်းဆုံးပါ။ ပျော်စရာ အမှတ်တရတွေ ဖန်တီးဖို့ကလည်း သူငယ်ချင်းတွေက အကောင်းဆုံးပါပဲ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ပျော်အောင်သာ နေပါ။
(၈) ရယ်မောစရာလေးတွေကို ကြည့်ပါ
လူမှုကွန်ယက်ကို မသုံးတဲ့သူဆိုတာ မရှိသလောက်ပါပဲ။ လူမှုကွန်ယက်မှာ ဟာသတွေ ရယ်ရတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်အတိုလေးတွေ ရှိပါတယ်။ ဒါတွေကလည်း သင့်ကို စိတ်သက်သာရစေပြီး ပျော်ရွှင်စေပါတယ်။
အားလုံးပဲ ပျော်ရွှင်စရာ နေ့ရက်လေးတွေကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် …. ။
ပြျောရှငျစရာနရေ့ကျတှကေို ပိုငျဆိုငျစမေယျ့ အဖိုးတနျ နညျးလမျးလေးမြား
ပြျောရှငျရတာ လူတှအေားလုံးက နှဈသကျကွပါတယျ။ ပြျောရှငျခွငျးက ကနျြးမာခွငျးအတှကျ ရုပျရညျနုပြိုခွငျးတို့အတှကျ အထောကျအကူပွုနတေဲ့အရာလညျး ဖွဈပါတယျ။ အမွဲတမျးလိုလို စိတျပူပနျမှုတှနေဲ့ ပွညျ့နတေဲ့သူမှာ ရောဂါတှေ ဖွဈဖို့လိုသလို ရုပျရညျရငျ့ရျောခွငျးကိုလညျး ဖွဈစပေါတယျ …
ပြျောရှငျဖို့အတှကျဆိုရငျ အလိုအလြောကျတော့ ပြျောရှငျခွငျးက ကိုယျ့ဆီကို အမွဲ ရောကျနမှော မဟုတျပါဘူး။ ပြျောရှငျဖို့အတှကျ ကိုယျတိုငျကလညျး နညျးလေးတှကေို သိထားပွီး လိုကျနာဖို့ လိုအပျပါတယျ။
ပြျောခငျြတယျဆိုရငျတော့ ပြျောအောငျနရေမှာပါ။ စိတျညဈတာတှကေို တှေးနမေိရငျ စိတျရှုပျတဲ့အကွောငျးတှကေိုသာ တှေးနမေိရငျ သငျ ပြျောရမှာ မဟုတျပါဘူး။ ပြျောရတဲ့ အကွောငျးလေးတှကေို တှေးတာကလညျး သငျ့ကို ပြျောစသေလို ဘာ စိတျညဈစရာမှ လြှောကျမတှေးတာကလညျး ပြျောရစပေါတယျ။
စိတျညဈနတေဲ့အခြိနျမှာ တဈခါလောကျ ရယျကွညျ့ပါ။ ရယျတာက ဘယျလောကျ လူ့စိတျကို ပေါ့ပါးစလေဲဆိုတာကို အသိသာဆုံး အခွအေနေ ဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ရယျစရာ ရှိ ရယျလိုကျပါ။ သူငယျခငျြးတှေ မိတျဆှတှေနေဲ့အတူ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ရယျမော ပြျောရှငျအောငျနပေါ။
မဖွဈမနေ ကွုံရတဲ့ လောက အခကျအခဲတှဆေိုရငျတော့ သငျ ခံစားရမှာပါပဲ။ ဒါပမေဲ့ ကွီးကွီးကယျြကယျြမဟုတျတဲ့အရာတှကေို သိပျမခံစားပါနဲ့။ သငျ့ကို ခံစားစလောရပွီဆိုတာနဲ့ မလေို့ကျပွီး အာရုံလှဲလိုကျပါ။ စိတျပေါ့ပါးဖို့က ပြျောရှငျသှားဖို့အတှကျ သော့ခကျြ တဈခုလညျး ဖွဈပါတယျ။
(၄) စိတျဖိစီးမှုတှကေို မွနျမွနျ ဖွရှေငျးပါ
စိတျဖိစီးလာရငျ စိတျညဈလာရငျ အကွောငျးအရငျးဆိုတာ ရှိစမွဲ ပါပဲ။ စိတျဖိစီးစတေဲ့ အကွောငျးအရငျးကို မွနျမွနျ ရှငျးပွီး အဖွထေုတျလိုကျပါ။ စိတျဖိစီးမှုက အခြိနျကွာလေ သငျ့ကို မပြျောရှငျရစလေပေဲ ဖွဈမှာပါ။ ပြျောရှငျတာသာ တာရှညျမခံတာ စိတျညဈရတာတှကေ တာရှညျတတျလို့ မွနျမွနျ ဖွရှေငျးသငျ့ပါတယျနျော။
(၅) စိတျညဈရငျ သိမျးမထားပါနဲ့
စိတျညဈရငျ ဘယျတော့မှ တဈယောကျတညျး စိတျအညဈမခံပါနဲ့။ ဒီလို မဟုတျတောငျ ဘာမှ မလုပျပဲ အတှငျးထဲမှာပဲ စိတျညဈစရာကို ထညျ့ထားပွီး မဖွရှေငျးဖို့ လုပျထားတာမြိုး မလုပျလိုကျပါနဲ့။ သငျ့ကို စိတျညဈမှုတှေ ဝါးမြိုသှားပွီး မပြျောရှငျမှုတှေ ရောကျလာစနေိုငျလို့ သတိထားသငျ့တဲ့ အခကျြပါနျော။
(၆) စိတျထှကျပေါကျ အမွဲ ထားပါ
လူတိုငျး စိတျထှကျပေါကျ ရှိဖို့ လိုအပျပါတယျ။ ဘယျသူ့ကို မှ မထိခိုကျစတေဲ့ စိတျထှကျပေါကျတော့ ထားထားသငျ့ပါတယျ။ စိတျငွိမျစတေဲ့ တဈနရောမှာ အိပျပဈလိုကျတာမြိုး၊ နရောလှတျတဈခုမှာ ပုလငျးတှကေို ရိုကျခှဲတာမြိုး၊ ငိုလိုကျတာမြိုး၊ တဈယောကျယောကျကို ရငျဖှငျ့တာမြိုး၊ တဈနရောရာမှာ အကယျြကွီး အျောလိုကျတာမြိုး စတဲ့ စိတျထှကျပေါကျပေးလိုကျမှုတှကေ လူကို တကယျသကျသာစတောမို့ ပြျောရှငျဖို့ အထောကျအပံ့တှလေညျး ဖွဈပါတယျ။
(၇) သူငယျခငျြးတှနေဲ့ ပြျောပါ
စိတျညဈတဲ့အခါ သူငယျခငျြးတှကေ အကောငျးဆုံးပါ။ ပြျောစရာ အမှတျတရတှေ ဖနျတီးဖို့ကလညျး သူငယျခငျြးတှကေ အကောငျးဆုံးပါပဲ။ ဘာပဲဖွဈဖွဈ သူငယျခငျြးတှနေဲ့ ပြျောအောငျသာ နပေါ။
(၈) ရယျမောစရာလေးတှကေို ကွညျ့ပါ
လူမှုကှနျယကျကို မသုံးတဲ့သူဆိုတာ မရှိသလောကျပါပဲ။ လူမှုကှနျယကျမှာ ဟာသတှေ ရယျရတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုငျအတိုလေးတှေ ရှိပါတယျ။ ဒါတှကေလညျး သငျ့ကို စိတျသကျသာရစပွေီး ပြျောရှငျစပေါတယျ။
အားလုံးပဲ ပြျောရှငျစရာ နရေ့ကျလေးတှကေို ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ …. ။